Wasiirkii Warfaafinta ee dowladda federalka oo is casilay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Wasiirkii Warfaafinta ee dowladda federalka oo is casilay.
On May 2, 2019 226 0
Daahir Maxamuud Geelle oo ahaa wasiirkii warfaafinta ee dowladda ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo ee uu ka hayay xukuumadda uu madaxda u yahay Xasan Cali Kheyre.
Waraysi uu bixiyay Geelle ayuu ku sheegay in is casilaadiisu ay timid kadib kala aragti duwanaansho adag oo soo kala dhexgashey isaga iyo ra’iisul wasaaraha, taas oo soo jiitameysay 11-kii bilood ee lasoo dhaafay.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta wuxuu sheegay in arimaha ay isku qabteen isaga iyo Kheyre ay ku qotomaan siyaasadda gudaha iyo dibadda, isagoona ballanqaaday inuu si faafaahsan uga hadli doono maalmaha soo socda.
Is casilaada Geelle ayaa muujineysa khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka, waxaana ay timid iyadoo horey ay isku casileen wasiiro muhiim u ahaa dowladda, halka kuwa kalana shaqada laga eryay.
Daahir Maxamuud Geelle ayaa caan ku ahaa qabashada Shirar jaraa’id oo uu kaga hadlayo tallaabooyinka ay qaaday dowladda iyo qaraxyada ay Xarakada Al-Shabaab ka fuliso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.